E-Journal: smart answer is Submarine!
ကြိုးစားပမ်းစားမဟုတ်တောင် ဘာလည်းဟဆိုပြီး စဉ်းစားသွားသူတွေအတွက် အဖြေမှန်လေးကို ပြောပြတာပါ။ ဟိုနေ့က မေးမိတဲ့ လူ၆၀တင်တဲ့သဘောင်္၊ လူ၆၀တက်ပြီးတော့ ရေအောက်မြုပ်သွားတယ်ဆိုတာက ဒီလိုဗျ။ ဟဲ ဟဲ။
အ ဟွန်း ဟွန်း . . . . . ကိုဗာဘို ။ ဘယ်ရမလဲ ကိုဝန်ဆောင်သည် တက်လာလို့ မြုပ်တာဖြစ်မယ် ။ ပေး ဗျာ လက်ဆောင်။
ဒီလူဟာလေ။ ဒါပဲတွေးနေတယ်။ ဗိုက်ကြီးချင် အဲလေ၊ ကလေးလိုချင်နေလားမသိဘူး။ ရေငုပ်သဘောင်္လေဗျာ။ လိုက်မယ့်သူစုံပြီဆိုတော့ သွားမယ်ဆိုပြီး ဆင်းသွားတယ်၊ ရေအောက်ကို၊ မြုပ်ရော။
မင်္ဂလာပါ ကိုသု =)
သဘောင်္မြုပ်သွားတာ ရေထဲမှာ ရောက်နေလို့ပါ။
လူဆံ့တာ မဆံ့တာက မြုပ်တာ မမြုပ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်တယ်။ =)
ဒီအဖြေကကောင်းတယ်။ ရေအောက်ကိုမြုပ်ဖို့ ရေထဲကိုရောက်နေဖို့လိုတယ်။ အခြေခိုင်တဲ့ အတွေး။ လောကကြီးမှာ ရလဒ်တစ်ခုအတွက် ချဉ်းကပ်ရမှာက သူရှိနေနိုင်တဲ့ အဝန်းအဝိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဖြေကိုတော့ မှားတယ်ပြောမယ်။ ဒီမှာက ရေငုပ်သဘောင်္ကြီး ဖြစ်နေတယ်ကိုး။
ဘာကြောင့် ရေအောက်ကို မြုပ်သွားသလည်းဆိုတာက................................... အဖြေမှန်လို့ လက်ဆောင်မပေးနိုင်ပေမဲ့....မုန့်က တကယ်ကျွေးလို့ ရပါတယ်....
အင်း။ ဒီတစ်ယောက်လည်း အစားပဲမက်နေတယ်ကိုး။ စဉ်းစားဖို့ကိုအားမထည့်ဘူး။ ဒီလိုသာဆိုရင် ဝပုတ်ဖြစ်တော့မယ်။
ရေမြုပ်သင်္ဘော ဖြစ်နေလို့ပေါ့ ကိုသုရယ်
ဒီလူက လူဆိုး။ သူ့ကိုမေးဖူးလို့ သူသိနေတာ။ အစီစဉ်ထဲ ဖြေပိုင်ခွင့်မရှိဆိုပြီး သူ့ကိုထည့်လိုက်ရမှာ၊ မေ့သွားတယ်။
“ရေငုပ်သင်္ဘောမို့ ထင်ပါ့ ဆရာသု ရေ”
တိုက်ဆိုင်တယ်။ အဖြေမှန်ကလည်း ရေငုပ်သဘောင်္ပဲဗျ။ အားလုံးထဲမှာ ဒီဆရာတစ်ယောက် အတွေးတော်တော်ပေါက်တယ်။
khin oo may။...။
ကဲ မကောင်းဘူးလား။ မခင်ဦးမေတစ်ယောက်စဉ်းစားတာ ကွက်တိပါပဲ။ ရေအောက်မြုပ်ဖို့ အလေးချိန်တစ်ခုခုတော့ ပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲ။ ဒါက သာမာန်ကျတဲ့ ယုတ္တိပဲ။ အတည့်စဉ်းစားတယ်။ ဖြေသွားပုံကို သဘောကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမရေ ရေငုပ်သဘောင်္ဖြစ်နေလို့ဗျ။
ballast system မကောင်းတာဗျ..။ ကျနော်က သင်္ဘောပေါ်နေ့တိုင်းတက်ပြီး သံချေးခေါက်နေတော့... နဲနဲတော့ သိတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီက service လုပ်လိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ...။
သူကတော့ သီအိုရီသမားဖြစ်မယ်။ သူပြောတာတွေကို သားလည်းမသိ။ ပညာရှင်များ ကူညီကြပါကုန်လော့…။ တစ်ခုပဲ။ သူကများ လူကိုလာပြီး အကိုကြီးသုတဲ့။ ဆုံလာခဲ့ရင် ကောင်မလေးတယောက်လောက်ကို တို့နှစ်ယောက် ဘယ်သူပိုငယ်လည်း မေးကြည့်အုံးမယ်။ ဟင်း.. အဲဒီကျရင်တော့ ပေါ်မှာပဲ။ အသက်ပြောပါတယ်။
သင်္ဘောကတော့ အစတကည်းက ၀မ်းပေါက်နေလို့များလား (ဥာဏ်မီသလောက်လေး စဉ်းစားကြည့်တာပါး) )
ဒီကအမ မေ့တတ်တဲ့ အကျင့်များရှိလေသလား၊ တွေးနေမိတယ်။ သဘောင်္ဝမ်းအပေါက်က အစကတည်းက ရှိနေတယ်စဉ်းစားလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သေချာတွေးမှ အယ်၊ သူပြောတာလည်း မှန်နေသလိုပဲလို့ တွေးလိုက်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ အပေါက်ရှိလို့ကို မြုပ်ရတာကိုး။ ရေငုပ်သဘောင်္လည်း ဒီလိုပဲလေ။
မာလိန်မှုး နဲ့ဆိုတော့ ၆၁ ယောက် ဖြစ်သွားလို့ ထင်တယ်
ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ အစကတည်းက ရေ မြုပ်သင်္ဘော လားမှ မသိတာ
အဟဲ ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး .. ရမ်းစမ်း ဖောကြည့်တာ :P
ဒီအကိုကလည်း အလုပ်ဆိုရင် သေချာလုပ်တာ မလုပ်တာထက် အခြေအနေတရပ်အတွက် အဓိကကို တွေးတတ်သူဖြစ်မယ်။ မာလိန်မှုးကို စဉ်းစားပေးလို့။ ဒါပေမဲ့ နောက်မှထည့်တွက်တယ်။ လူဆိုး။ အဖြေကိုလည်း နှစ်ခုပြောသွားတယ်။ နောက်တစ်ခုလည်းကျရော ထည့်မှန်ရောပဲ။ ဟုတ်ပ ရေမြုပ်သဘောင်္ကြီးကိုးဗျ။
ကဲအားလုံးပဲ ဆက်စပ်တွေးပေး၊ ဖြေပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ။ နောင်များလည်း လာလည်ကြပါ။ စာတွေဖတ်လို့ လိုအပ်တာတွေ၊ ပြုပြင်စရာတွေကိုလည်း အားမနာတမ်းသာ မှာကြားသွားပါ။ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေကြပါစေ ခင်ဗျာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 8:21 PM
ခုမှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်..ထင်တော့ထင်ခဲ့သားပဲ...တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပါလို့.
အဟား..ကိုသုခမိန် ရေ.. ကျေးဇူးနော်.ဖတ်ပြီးသွားပြီ။